Waxqabadka 2010 | Somaliland Nordic Relief
Si loo gaadho himilada guud ee mashruuca waxa cilmibaadhis lagu sameeyay xaaladda dhimirka ee dalka oo dhan. Waxa kale oo la sameeyay siminaaro iyo wacyigalin taas oo lagu martiqaaday siyaasiyiinta, qareenada iyo cid kasta oo wax ka qaban karta sidii dadka dhimirka qabaa ay u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinnimo. Waxa siminaarada lagaga hadlay waxyaalaha sababa dhimirka kuwa ugu waawayn oo ay ka mid yihiin qaadka oo la wada og yahay xaalkiisa, gudniinka fircooniga ah oo la ogaaday in naxdintiisa iyo xanuunkiisu uu hablaha qalbigooda nabar ku reebo, waliba hablaha baadiyaha deggen ee bilaa suuxdinta lagu gudo. Waxa kale oo tababar la siiyay culimada iyo dadka kale ee daaweeya dadka qaba dhimirka si ay u kala gartaan qofka qaba xanuun caadiya iyo qofka jin ama sixir uu ku keenay xanuunka.
Waxaa 10 Oktober 2009 iyo 2010 laga qayb galay maalinta dhimirka ee aduunka oo Hargeisa lagu qabtay, halkaasoo lagu soo bandhigay halkudhigyo iyo banners lagu muujinayo baahida loo qabo in tixgelin dheeri ah la siiyo dadka dhimirka qaba. Waxaa kale tababaro la siiyay 5 xarumood oo lagu daweeyo xanuunada dhimirka iyo iyada oo safar aqoon korodhsi loogu diray dalka Ethopia xubno ka socda GAVO iyo wasaarada caafimaadka.
Mashruuca horumarinta bulshada iyo genderka
SNR waxay dhamaystirtay mashruuc hal sanno ah oo dhinaca genderka ah kaas oo ay maalgelintiisa lahay 90% hay’ada SIDA Sweden iyada oo soo marsiisay lacagta Forumsyd, halka ay SNR bixisay 10%. Mashruucu wuxuu bilaamay July 2010 , wuxuuna dhamaaday June 2011 waxaana fuliyay ururka GAVO. Lacagta mashruucu waxay ahayd 542 000 kr marka la isku daro labada sannadood ( 394 000 kr sannadkii 2010).
Mashruucan muhiimadiisa ugu weyni waa in la abuuro jawi fiican oo ay ku wada shaqan karaan bulshada rayidka ah, dawladaha hoose, iyo hay’adaha wadani ahiba. Mashruucani wuxuu xoojinayay in bulshada rajyidka ahi iyo hay’adaha wadani ahi uga qeyb qaadan horumarka deegaankooda dhinaca siyaasada, horumarka ijtimaaciga ah isla markaana loo abuuri ahaa jawi caafimaad qaba oo lagula shaqeeyo hay’adaha dawliga qaar ahaan dawkladaha hoose.
Mashruuca waxaa laga fuliyay burco iyo Gebilay iyada oo seminaaro arrimahaas kor ku xusan laga qabtay. Waxaa kale oo fiiro ah la siiyay sidii dumarku ay kaalin firfircoon uga qaadan lahaayeen arrimaha siyaasada ee deegaankooda isla markaana xuquuqdooda loo ilaalin lahaa. axaa iyana sidoo koorsooyin dhinaca saxaafada la siiyay 10 oo ka tirsan Women in Journalism Association (WIJA. Ururka waxaa lagu caawiyay kharaashkii ay ku soo saari joornaal ka hadlaya arrimaha gaarka u khuseeya dumarka iyo qalab isugu kobuuro, kamaradaha sawirka si minhadooda xirfadeed kor loogu qaado.
Seminaarada la qabtay
Waxaa kale oo Jaamacada laga bixiyay Gabdho 20 oo bartay muddo sannad ah business and management.
Gabdhaha oo Jaamacada dhiganaya
Waxaa iyana sidoo koorsooyin dhinaca saxaafada la siiyay 10 oo ka tirsan Women in Journalism Association (WIJA. Ururka waxaa lagu caawiyay kharaashkii ay ku soo saari joornaal ka hadlaya arrimaha gaarka u khuseeya dumarka iyo qalab isugu kobuuro, kamaradaha sawirka si minhadooda xirfadeed kor loogu qaado.
Gabdhaha WIJA – short courses
WIJA oo qalabkii lagu wareejinayo